HomeWararka CiyaarahaZinedine Zidane oo Xiiseenaya Qabashada Tabaranimo Koox aanan Aheyn Manchester United
October 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa lagu soo waramayaa inuu u furan yahay inuu majaraha u qabto Paris Saint-Germain haddii ay kooxdu badasho Mauricio Pochettino .
Macalinka reer France ayaa ciyaarta ka maqnaa tan iyo markii uu ka tagay Bernabeu dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore, waxaana maalmihii ugu dambeeyay si xoogan loola xiriirinayay shaqada Manchester United.
Si kastaba ha ahaatee, Zidane ayaa loo malaynayaa in aanu wax dan ah ka lahayn in uu Ole Gunnar Solskjaer ka beddelo Old Trafford, iyada oo ku guulaystaha koobka adduunka uu haatan doonayo shaqo u dhaw Dal ahaan.
Sida laga soo xigtay Mundo Deportivo , Zidane ayaa xiiseynaya inuu maamulo PSG haddii shaqadaasi la helo, laakiin mustaqbalka Pochettino ee Parc des Princes looma maleynayo inuu gabi ahaanba ammaan yahay.
Warbixintu waxa ay intaa ku dartay in Zidane aanu dareemayn baahida uu u qabo inuu dib ugu soo degdego shaqada maamulka, laakiin xidhiidhka adag ee kala dhexeeya Sergio Ramos ayaa ku qancin kara inuu qaado talaabada xigta ee dalkiisa, halka Kylian Mbappe uu sidoo kale aad ula dhacsan yahay 49-jirkan. .
Zidane waxa uu Real Madrid ku hogaamiyay saddex koob oo Champions League ah iyo laba horyaal oo La Liga ah laba jeer oo kala duwan oo uu ku sugnaa, waxaana lagu soo waramayaa inuu sidoo kale u furan yahay inuu maamulo France haddii uu xilka ka dego Didier Deschamps .